विज्ञान/प्रविधि – ZoomNP
सल्लेरी (सोलुखुम्बु), १० वैशाख । सीता एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाबाट जोगिएको छ ।
काठमाडौंबाट लुक्लाका लागि उडेको नौ एनएएचआर सीता एयरको विमानलाई लुक्लाको मौसम प्रतिकूलताका कारण फाप्लु विमानस्थलमा आकस्मिक अवतरण गराइएको थियो ।
आज बिहान करिब ८ बजे अवतरणका क्रममा विमानस्थलको भित्तामा ठोक्किएर विमानको पखेटा फुटेको तर अन्य क्षति नभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुले जनाएको छ । विमानमा चालक दलका तीन सदस्यसहित १७ यात्रु सवार थिए । तीमध्ये १२ विदेशी रहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक माधवप्रसाद बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो ।...
कुलमान लाइ सघाउने हैन त लोडसेडिङ हटाउन? एउटा आलुले ४० दिन सम्म यसरि बाल्न सकिन्छ बिजुली बत्ति, आफु पनि सिक्नुहोस र सक्दो शेयर गरि अरुलाई पनि सिकाउनुहोस
के घरमा बत्ति बाल्न विद्युत ग्रीडको सट्टा आलुको प्रयोग सम्भव छ?
जेरुशेलमको हिब्रु युनिभर्सिटीका राबिनोविच दाबी गर्छन्, ‘एउटा आलुले एलईडी बल्ब ४० दिनसम्म बाल्न सक्छ।’...
कुरा गर्दागर्दै फोन काटियो? अब चिन्ता नलिनुस त्यसरी फोन काटिए यसरी पाइन्छ क्षेतिपूर्ति!
काठमाडौं, १० चैत । बोल्दा बोल्दै फोन काटियो ? नआत्तिनुस अब क्षतिपूर्ति पाइन्छ ।
बोल्दा बोल्दै फोन काटिने, आवाज प्रस्ट नबुझिने, नेटवर्क आउने जाने भइ रहने जस्ता समस्या दूरसञ्चार क्षेत्रमा सेवाग्राहीका वषौँदेखिका गुनासा अझै पनि छन् । गोरखापत्र दैनिकले समाचार छापेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अबदेखि फोन गर्दा यस्ता समस्या दिने दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति स्वरुप पहिलो चरणमा बिचमै बोल्दाबोल्दै फोन काटिए सो कल वापतको पैसा फिर्ता गर्ने नियामवली र प्रविधि लागू गर्न गृहकार्य थालेको...
हुने भयो पुर्व प्रधानमन्त्री ओलिको योजना साकार: यसरी अघि बढ्यो घरघरमा ग्यास पाइप जोड्ने योजना
घरघरमा ग्यास पाइप जोड्ने तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको योजना अगाडि बढेको छ ।
यसका लागि जापानको कस्मो इन्जिनियरिङ लिमिटेड कम्पनीले उद्योग मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको छ । नेपालमा ग्यास र पेट्रोलको भण्डारण विकास गर्नका लागि सहकार्य गर्ने प्रस्ताव कस्मोले गरेको उद्योमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले बताए ।
कस्मोले उक्त प्रस्ताव बुधबार उद्योग मन्त्रालयमा पेश गरेको हो । प्रस्ताव पेश गरेपछि उद्योगमन्त्री जोशी र कम्पनीका प्रतिनिधिबीच बुधवारै उद्योग मन्त्रालयमा घरघरमा पाइपबाट ग्यास पुगाउने योजनाबारे छलफल समेत भएको थियो ।
प्रस्तावमा कम्पनीले नेपालले प्रस्ताव गरेअनुसारको भण्डारणस्थल...
दौडिने भयो पुर्व-पश्चिम रेल, रेलमार्ग निर्माणका लागि ११ हजार १ सय २३ रुख काट्न सिफारिस, यस्तो छ रेलमार्ग को रुट
काठमाडौं, काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालनका लागि सम्भाब्यता अध्ययन थालिदै गर्दा तराईमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बन्ने निश्चित भएको छ ।
परियोजनाअन्तर्गत सर्लाही र महोत्तरीमा पर्ने वनमा रहेका साल, साज, मसला, बाँझी, सिमल, सत्तीसाल, कर्मा, जामुन, खयर,...
विश्व चकित पार्दै भारतले रच्यो इतिहास, आज एकैपटक यसरी गर्यो १०४ वटा प्रक्षेपण (हेर्नुहोस पुरा भिडियो सहित)
एजेन्सी: भारतीय अन्तरीक्ष अनुसन्धान संगठन (आइसरो)ले बुधबार एउटै रकेटबाट एकसाथ १ सय ४ वटा प्रक्षेपण गरेको छ।
आइसरोले बुधबार बिहान ९ बजेर २८ मिनेटमा श्रीहरिकोटाबाट बहुप्रतिक्षित पीएसएलवी-सी ३७, काटरेसैट-२ सीरीज मिसनलाई सफलता पूर्वक प्रक्षेपण गरेको ट्विटरमार्फत जनाएको छ। योसँगै भारतले रकेट प्रक्षेपण विश्‍वमा नयाँ इतिहास रचेको छ।
राष्ट्रलाई अरबौ राजश्व तिर्न आनाकानी गरिरहेको एनसेल प्रयोगकर्ताको भने मन जित्ने खेलमा, आजदेखि एनसेल बाट फ्रिमा फेसबुक चलाउन सकिने
३ फागुन, काठमाडौं । निजी दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेलले निशुल्क फेसबुक चलाउन सक्ने सुविधा दिएको छ । सो सुविधा आज रातिदेखि लागु हुनेछ । एनसेलले फेसबुकसँगको सहकार्यमा निःशुल्क फेसबुक सेवा सुरु गरेको हो । मंगलबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा एनसेलले ‘सबैका लागि इन्टरनेट’ अभियान अन्तरगत निःशुल्क सेवा सुरु गरिएको बताएको छ । एनसेलका अनुसार अब फेसबुक लगइन गरेर लाइक, कमेन्ट, शेयरका साथै स्टाटस लेख्न पैसा लाग्दैन ।तर, फेसबुकमा अपलोड भएका तस्वीरहरु हेर्न भने इन्टरनेट वा डाटा नै...
काठमाडौंबासीले चढ्न पाउने भए चाडै नै रेल, काठमाडौं महानगर पालिका र वाइबिडी सिमेक्स कम्पनी बीच सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सम्झौता
काठमाडौँ, २६ माघ । दिगो सहरी यातायात व्यवस्थापनका लागि वाइबिडी सिमेक्स कम्पनी र काठमाडौँ महानगरपालिकाबीच मोनो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धमा आज द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले आज यहाँ आयोजना गरेको हस्ताक्षर कार्यक्रममा महानगरका तर्फबाट प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्की र वाइबिडी सिमेक्सका अध्यक्ष प्रसिद्धजङ्ग पाण्डेले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।
महानगरका कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङले काठमाडौँमा मेट्रो रेलको भन्दा मोनो रेलको सम्भावना राम्रो देखिएकाले सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागिएको बताए ।...